ताजा खबर – Nepal Online Khabar
नयाँदिल्ली : भारतको हरि'द्वारमा जारी कुम्भ मेलाको शाही स्नानमा जान नेपालका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका लागि विशेष रथको व्यवस्था गरिने भएको छ । श्रीपञ्चायती निरन्जनी अखडाका पीठाधीश आचार्य महामण्डलेश्वर स्वामी कैलशानन्द गिरीका प्रेस सल्लाहकार सगुन त्यागीका अनुसार मेला आयोजनास्थलबाट गं'गातटको शाही स्थानस्थलसम्म जान पूर्वराजा शाहलाई यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । ‘राजा ज्ञानेन्द्र विशिष्ट पाहुना हुनुहुन्छ, त्यही भएर उहाँका लागि र'थ पनि विशेष किसिमको तयार पारिँदै छ,’ प्रेस सल्लाहकार त्यागीले भने । शाहको रथ आचार्य महामण्डलेश्वर गिरी र आनन्द अखडाका पीठाधीश आचार्य महामण्डलेश्वर स्वामी बालकानन्द गिरीको रथको पछि रहने उनले जानकारी दिए । मेलामा अखडाका पीठाधीश र विशिष्ट व्यक्तिहरू शाही स्नानस्थलसम्म जान विशेष किसिमले सजाइएको रथ प्रयोग गर्ने परम्परा छ । त्यागीले पूर्वराजा दम्पती आइतबार साँझ आचार्य
नेपालमा गैँडाको सङ्ख्या बढेपछि मन्त्री आले खुशी !
काठमाडौं : वन तथा वातावरणमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले नेपालमा यस वर्ष एकसि'ङ्गे गैँडाको सङ्ख्यामा वृद्धि भएपछि खुशी व्यक्त गर्नुभएको छ । चितवनमा आज सार्वजनिक गरिएको राष्ट्रिय गैँडा ग'णना, २०७७ को नतिजाले नेपालमा गैँडाको सङ्ख्यामा वृ'द्धि भएको देखाएपछि मन्त्री आलेले खुशी व्यक्त गर्नुभएको हो । पाँच वर्षअघिको तुल'नामा यस वर्ष १०७ वटा गैँडा वृद्धि भएको छ । नेपालमा गैँडाको बासस्थानको सुरक्षा तथा आहाराका लागि सरकारले गरेको योग'दान पछिल्लो समय सफल हुँदै गएको मन्त्री आलेले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “वन्यजन्तु संरक्षणको क्षेत्रमा नेपालले गरेको यो'गदान अहिले सफल हुँदै आएको छ, जसको प'रिणाम आज सार्व|जनिक गरिएको गैँडाको सङ्ख्यामा देखियो ।” नेपालमा गै'डाको सङ्ख्या अबका वर्षहरुमा पनि बढ्दै जाने मन्त्री आलेले विश्वास गर्नुभएको छ । यस वर्षको गणनामा नेपालमा एकसि'ङ्गे गैँडाको सङख्या ७५२ पुगेको
Mar312021 by Puja SharmaNo Comments
माधव नेपाल र झलनाथ खनाल नेतृत्वको नेकपा (एमाले) निकट युवा संघ कार्यालयको औपचारिक उद्घाटन भएको छ।युवा संघले बबरमहलमा आयोजित विशेष कार्यक्रमबीच वरिष्ठ नेता माधव नेपालले कार्यालय भवनको औपचारिक रूपमा उद्घाटन गरे।देशमा विकसित राजनितिक घटनाक्रमले युवा आन्दोलनलाई पुनर्गठित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ भन्दै नेता नेपालले युवाहरू संगठीत हुनुपर्ने बताए।
Mar192021 by Puja SharmaNo Comments
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मालसामान आयात गर्दा लाग्ने परिवर्त्य विदेशी मुद्राको सीमा बढाएको छ । अबदेखि आयातित वस्तुको भुक्तानीका लागि व्यवसायीले एकपटकमा अधिकतम अमेरिकी डलर १ लाख वा सो बराबरको परिवत्र्य विदेशी मुद्रासम्मको कारोबार गर्न पाउने भएका छन् । उक्त सीमा भने परिवत्र्य विदेशी मुद्रा भुक्तानी हुनेगरी भारतबाहेक अन्य मुलुकबाट प्रतीतपत्रबाहेक डकुमेन्ट अगेन्स्ट पेमेन्ट ९डीएपी० र डकुमेन्ट अगेन्स्ट असेप्टेन्स ९डीएए०का माध्यमबाट मात्र गर्न सकिनेछ । यो व्यवस्थाअनुसार विदेशी मुद्राबाट गरिने आयातमा सहजीकरण गर्न राष्ट्र बैंकले प्रदेशस्थित कार्यालयका साथै वाणिज्य बैंकहरू र राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ । राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले बिहीवार विदेशी विनिमय कारोबार गर्न इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था र अन्य निकायलाई जारी गरिएको एकीक
Mar132021 by Nepal KhabarNo Comments
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मनोमानी ढंगले पार्टीमा जिम्मेवारी हेरफेर गरेपछि रुष्ट बनेको माधव नेपाल समूहले शनिबार केन्द्रीय समिति र सांसदहरुको भेला बोलाएको छ । भेलामा ओलीको कदमपछि कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारेमा छलफल गरी निष्कर्षमा पुगिने नेताहरुले बताएका छन् । शुक्रबार बैठक राखेर ओलीले नवौं महाधिवेशनबाट चुनिएका अध्यक्ष र महासचिवबाहेक अरु पदाधिकारीहरूको पद खारेज खारेज गर्नुका साथै जिम्मेवारी हेरफेर गरेका थिए । यस्तै माओवादीमा नफर्किएका रामबहादुर थापा बादल, मणि थापा, टोपबहादुर रायमाझीलगायत नेताहरुलाई ओलीले केन्द्रीय कमिटीमा ल्याउनुका साथै जिम्मेवारी समेत दिएका छन् । ओलीको यो निर्णयपछि रुष्ट बनेको नेपाल समूहले चैत ४ गतेका लागि राष्ट्रिय भेला समेत बोलाइसकेको छ भने समानान्तर कमिटी बनाउने घोषणा पनि गरेको छ । ओलीले पार्टी फुटाउने उद्देश्यका साथ शुक्रबार कदम चालेको भन्दै नेपाल समूहले निर्णय व
Mar112021 by Nepal KhabarNo Comments
ओलीले बैठक नबोलाएपछि माधव पक्ष असन्तुष्टhttps://nepalonlinekhabar.com/14923/
काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बैठक नबोलाएपछि माधव नेपाल समूह असन्तुष्ट बनेको छ । सर्वोच्चको फैसलापछि पूर्व नेकपा एमाले र माओवादी पूर्व हैसियतमा पुगे पनि एमाले अध्यक्षको हैसियतले ओलीले बैठक बोलाउन ढिला गरेपछि नेपाल समूहले लागातार आफ्नो समूहको बैठक राख्दै आएको छ । बुधबार केन्द्रीय समिति सदस्यहरुबीच छलफल गरेको माधव पक्षले बिहीबार स्थायी समिति सदस्यहरुबीच छलफल गरेको छ । ‘नेकपा एकता हुन नसक्ने र एमाले माओवादी अलगअलग हुने सर्वोच्चको फैसला तितो भएपनि त्यो स्थितिमा नेकपा एमालेलाई एकतावद्ध गरेर विधि, प्रणाली र पद्दतिबाट कसरी अघि बढ्ने, हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार छ । यस सम्बन्धमा के गर्ने भन्नेमा छलफल गर्न यथासिघ्र बैठक बोलाउनुपर्ने, छलफल होला भन्ने अपेक्षा गरेका थियौँ ।' त्यो नभएपछि यति ठुलो नेकपा त हामीले गुमायौ, फेरि एमालेको शक्ति पनि गुमाउनुपर्ने त होइन भन्नेमा हामील
काठमाडौं । भावी सत्ता समीकरणबारे काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा मौन जस्तै छन् । एकमना सरकार चलाएको ‘नेकपा’ एमाले र माओवादी केन्द्रमा फर्किँदा पनि देउवामा हलचल आएको छैन । नेपाली राजनीतिमा उथलपुथल हुँदा पनि निर्णायक शक्ति केन्द्र बूढानीलकण्ठ (देउवा निवास) शान्तजस्तै छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच सरकार जोगाउन र नयाँ सरकार बनाउन तीव्र दौडधुप चलिरहेका बेला देउवाको मौनता आश्चर्य लाग्दो छ । सत्ता राजनीतिका भेट्रान खेलाडी भनिने देउवा यो पटक प्रधानमन्त्री बन्ने मौका आउँदा निश्कृय जस्तो देखिएको पाइन्छ । तर महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का भने देउवा प्रधानमन्त्रीको रेसभन्दा बाहिर र निश्कृय पनि नरहेको बताउँछन् । उनले भने, ‘सभापतिजीले प्रधानमन्त्री रेसमा छैन मात्र भन्नु भएको छैन, संसदीय व्यवस्थामा विपक्षी दलक
हरेक व्यक्तिले आफ्नो सुखी वैवाहिक जीवनको कल्पना गर्ने गर्छन् । विवाह अघि कसैलाई पनि थाहा हुँदैन कि उनीहरुको सम्बन्ध कति दिन, कति महिना वा कति वर्षसम्म चल्दैछ । दुई व्यक्ति जब सँगै हुन्छन् तब उनीहरुले आफ्नो जीवन रथलाई सही तरिकाले चलाउने कोसिस गर्ने गर्छन् । तर रथ जहिले पनि सन्तुलित तरिकाले चल्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन । सुरुवातमा जो पार्टनर राम्रो लाग्छ, उसँग समस्याको सिलसिला त्यतिबेला सुरु हुन थाल्छ जब गृहस्थ जीवनका जिम्मेवारीले आफ्नो खुट्टा पसार्न थाल्छ । त्यतिबेला मानिसहरुलाई लाग्छ कि उनीहरु विवाहित जीवनका लागि बनेका होइनन् । ९० की दशककी बलिउडकी निकै चर्चित अभिनेत्री मनिषा कोइराला पनि ती मध्ये एक हुन् जसको वैवाहिक सम्बन्ध टुटेको छ । उनले आफ्नो मनको ढोकालाई यसरी बन्द गरिदिएकी छिन् कि उनी अहिले पनि एक्लो जीवन बाँचिरहेकी छिन् । मनिषा कोइरालाले सन् २०१० जून १९ मा नेपालका व्या
Mar32021 by Nepal KhabarNo Comments
Posted in ताजा खबर, समाचार
के तपाइँलाई थाहा छ विश्वको सबैभन्दा महंगो तरकारी कुन हो ? यसबारे थाहा पाउँदा तपाइँलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ तर यो सत्य हो कि यो तरकारी नेपालमै उत्पादन हुन्छ । नेपालको विशेषगरी हिमाली क्षेत्र, त्यसमा पनि कर्णाली प्रदेशमा यो तरकारी पाइन्छ यसबाहेक भारत, भुटान, तिब्बतको हिमाली क्षेत्रमा पनि यो च्याउ पाइन्छ । यसबाहेक उत्तरी गोलार्द्धका अन्य क्षेत्रमा पनि यो च्याउ पाइन्छ । नेपालीमा गुच्ची च्याउ भनिने यो तरकारीलाई अंग्रेजीमा कोरल मशरुम भनिन्छ । यो प्राकृतिक रुपमा उम्रिने च्याउ हो जसको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ३० हजार रुपैयाँदेखि ४० हजार रुपैयाँ प्रतिकिलो पर्छ । अनुसन्धानकर्ताहरु जयकान्त राउत, जीतेन्द्र उपाध्याय, विजय राघवन, मिनु अधिकारी, सन्तोषी भुसाल, प्रगुन सुन्दर सैंजू, चन्द्रमोहन गुर्मछान, अञ्जना गिरी र लोकरञ्जन भट्टले नेपालमा यो च्याउको व्यापार र संरक्षणका विषयमा संयुक्त रुपमा गरेक